Lego Marvel Spider-Man 76151 Venomosaurus Ambush တွင် Spider-Ham minifigure ပါဝင်သည်
23 / 02 / 2020 19 / 08 / 2020 ဂရေဟမ် 3792 Views စာ0မှတ်ချက် 76151 Venomosaurus ကင်းထိုး, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, နယူးယောက်ကစားပွဲ, ပင့်ကူဟမ်း, Spider-Man
နောက်ထပ်အသစ် Lego ဒီပစ္စည်းကိုနယူးယောက်ခ်ပွဲတော်ပြပွဲမှာဒီအချိန်ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Marvel Spider-Man 76151 Venomosaurus ကင်းထိုး.
Lego Marvel Spider-Man 76151 Venomosaurus ကင်းထိုး မှာထင်ရှားခဲ့သည် နယူးယောက်ကစားပွဲ, Zusammengebaut အစီရင်ခံစာများ။ အဆိုပါ set ကို၏ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူပျော်စရာတွေအများကြီးရှိခြင်းခံရဖို့လှပါတယ် Spider-Man, Venom တစ်ဒိုင်နိုဆောစီးနင်းနှင့် Spider-Man ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်ရန်တစ် ဦး အကြံပေးအဖွဲ့၌တည်၏။ Venom ဥဥပေါက်တာတောင်မှနည်းနည်းပဲရှိတယ်။ အဆိုပါအစု 640 ကိုအပိုင်းပိုင်းအသုံးပြုသည်။
Super Heroes set များကဲ့သို့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်အတိုင်း minifigures သည်ပရိသတ်များစွာအတွက်အဓိကမဲချခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအစုသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Spider-Ham နှင့်အတူပါလာသည် Spider-Man, Iron Spider နှင့် Venom ။
ပင့်ကူဟမ် Lego minifigure အသစ်တစ်ခုကိုပုံသွင်းခေါင်းကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဇာတ်ကောင်ပထမ ဦး ဆုံး၌ထငျရှား Marvel ပတေရုသ Porker, အ Spectacular Spider-Ham သရုပ်ဆောင်နှင့်ဖွင့်ခဲ့သည် Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ 2.
အဆိုပါ Lego Group က 2020 ၏ Toy of the Year ဆုပေးပွဲတွင်ဆုသုံးဆုရရှိခဲ့သည်.
LEGO စုဆောင်း Minifigures စီးရီး 20, Lego Star Wars: အဆိုပါ Mandalorian 75292 အဆိုပါသင်တုန်းမောက်, 75317 အဆိုပါ Mandalorian & အဆိုပါကလေး, Lego Star Wars 75287: D-0 နှင့် Lego Minions နယူးယောက်ခ်အရောင်းအဝယ်ပြပွဲတွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်။
← LEGO သည် Toy of the Year ဆုအတွက်သုံးဆုရရှိခဲ့သည် Stranger Things, Star Wars နှင့် City
Lego ကိုပိုကြည့်ကောင်းအောင် Star Wars 75278 DO →